Date My Pet » Kudanana Mukadzi Muduku Pashure Divorce Made Easy
Last updated: Jan. 20 2021 | 2 Maminitsi verenga
Age disparity vari pabonde haasisipo ane sawanikwa chaiyo. zvisinei, vanhu Kuva mamwe mapoka kubatanidzwa muukama dzakadaro kakawanda kupfuura vamwe. Semuyenzaniso, maererano kudzidza yakabudiswa Marriage uye Review Family, Varume vakarambana vane vangangoramba zuva uye varoore kana kuroorwa zvakare vakadzi vaduku zvikuru kupfuura pavo.
Sei varume vakawanda vakarambana kutarira kudanana vakadzi vaduku?
Vanachiremba nezvazvo zvinhu zvinoverengeka zvinogona kusundira vakarambana nevarume kutsvaka vakadzi vaduku zvikuru kupfuura kwavari kufambidzana. Pasi apa inosanganisira rakajairika vari pakati pavo.
– Vanowana kumbotamba Mafungiro evakadzi vaduku kupfuura.
– Pashure kurambana, Varume vakawanda zvinoda nguva yakawanda kuti apore; sezvo vari kare kurwadziwa, vanosarudza musi vakadzi vane shoma mupfungwa mukwende. vakadzi vaduku, nokuda zvishoma kufambidzana ruzivo, kazhinji takura zvishoma mupfungwa mukwende.
– vakadzi vaduku kashoma kusamuendesa vanhu kuti vagadzirise pasi uye vane mhuri. Vachiwanzoti kufunga zvakawanda pamusoro vaivapo pane nezveremangwana; Ivo vanoda kurarama nguva. Kuva pasina wenyaya rwoga kunoita kufambidzana mafaro kupfuura varume vakarambana.
– Zviri nyore zvikuru kufadza vakadzi vaduku. Vakarambana vanhu 40 vavo, 50'S kana 60 kuti kazhinji mari yakakwana kutora vamwe vavo vaduku zvinoshamisa nzvimbo ivo (vasikana) hatina kumbova kuti, vazvitenge zvipo havana kumbobvira kumuka uye kugadzirisa zvinetso zvavo (izvo kazhinji mano ndivo) nokukura kukuru. Zviito izvi kakawanda zvakakwana kuti zvirambe zviri vakadzi vaduku.
Nepo zvinhu zvose zvataurwa pamusoro apa dzine vamwe basa kuti kutamba kana munhu akarambwa murume anosarudza kudanana mukadzi muduku zvikuru kupfuura iye, pangava nomumwe chikonzero anoshanda shure yakadaro kusarudza munhu. Kune varume vanotanga kutsvaka vakadzi vaduku nokuti havagoni kuwana munhu vezera ravo boka. Statistics zvinoratidza kuti kurambana vakawanda muUnited States kutora nzvimbo apo munhu ari ukama huri pakati 53 uye 72 makore; Vakadzi vashoma chaizvo kuva zera iri boka kusaroora.
vakarambana? Kudanana mukadzi muduku? Uchengete zvinhu izvi mupfungwa
Kana achifambidzana mukadzi muduku zvikuru kupfuura iwe, unofanira kuchengeta zvimwe zvinhu zviri mupfungwa.
– mudiwa wako anoziva kuti hamusi gotwe Chap kumativi; saka, Havaedzi kuratidza kuti uri mumwe. Regai vanopfeka mavara kuti hausi wakasununguka mune; usaita zvinhu anowanzonzi kunoitwa vakomana rwakadai; regai kuita kuedza kuratidza kuti uchiri simba zvakakwana. Ava turnoffs kazhinji guru kuti mukadzi upi, kana muduku.
– Itira mumwe wako muduku saizvozvo sezvo ungadai kubatwa mukadzi wezera rako. Kana wava kuziva pamusoro zera disparity, ukama hakushandi.
– Unogona inonyatsokwanisa kutenga zvipo nokuti mukadzi mutsva muupenyu hwako, asi iwe unofanira haana overdo izvozvo. Kana upenye yakawandisa mari, mukadzi angafunga kuti uri kungoedza kushamisira.
Ukama pakati murume mukuru mumwe mukadzi muduku uye sezvo wose sezvo chero dzose kudanana. saka, kana munhu akarambwa munhu anotarira kuti kufambidzana nomumwe munhu muduku zvikuru pasina chakaipa mariri.
Itai Crush? Heunoi Nzira ngavazivise
Sei Kuti Long-Distance Relationships Work
Zvinoreva Kuva Kiss
Tips zvitatu Online Dating Success
Ndiani Anofanira Kubhadhara pamusoro Date First – Advice For Men